Khilaaf Hadheeyay Meel-marinta Digreetadii Dani Ku Magacaabay Agaasimaha PSF AwdalMedia Awdal Media Khilaaf Hadheeyay Meel-marinta Digreetadii Dani Ku Magacaabay Agaasimaha PSF
Muddo laba maalin ah kadib waxaan weli lagu guuleysan in xilka lagu wareejiyo Agaasimaha Cusub ee Madaxweynaha Puntland uu u Magacaabay Ciidamada difaaca Puntland ee PSF.
Saraakiisha Sar sare ee Ciidamada PSF ayaa kasoo horjeestay xilka qaadistii uu Deni ku sameeyay Agaasimaha PSF-ta Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano, iyaga oo soo baneeyay Saldhigyadii ay kaga sugnaayeen duleedka Magaalada Boosaaso.
Magaalada Boosaaso waxaa sababo la xiriira in xilka lagu wareejiyo Agaasimaha Cusub ee Deni u Magacaabay Ciidamada PSF u tegay Wasiirka Amniga Puntland iyo Xubno kale, iyaga oo ku guuldareystay kadib diidmo weyn oo ay muujiyeen Saraakiisha Ciidamada PSF.
Wasiir Amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa ku amray Dhamaan ciidamada PSF ee Boosaaso jooga in aysan xerada kasoo bixin, iyaga iyo Gaadiidkooda.
Wuxuu sheegay in xilku yahay meerto, wuxuuna ugu baaqay Maxamuud Cismaan Diyaano oo ah Agaasimihii uu xilka qaadista ku sameeyay Madaxweyne Deni in aysan qaadin dhalinyaranimo, isaga oo ku hanjabay in cid aysan ka aqbaleyn in ay Amniga Khalqal geliso
Taliyaha guud ee Ciidamada difaaca Puntland, S/Gaas Yaasiin Cumar Dheere ayaa ka codsaday Agaasimaha xilka qaadista lagu sameeyay ee PSF, Maxamuud Cismaan Diyaano in uu xilka wareejiyo.
Taliyaha Ciidanka difaaca Puntland Yaasiin Cumar dheere ayaa tilmaamay in aysan Boosaaso u baahnayn colaad iyo xiisad dagaal, islamarkaana aysan dowladdu diyaar u ahayn arrintaas haddii aan laga fursan waayin.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Saraakiisha Ciidamada PSF ay jawaab ka bixiyaan hadallada kasoo yeeray Waaiirka Amniga iyo taliyaha Ciidamada difaaca Puntland.
Boqor Buur-madow Oo La Kulmay Dadkii Laga Soo Bara-kiciyay Somaliland